Simbi simbi bhaudhi Vagadziri | China Simbi simbi bhaudhi Vatengi, Fekitori
Hot Dip kwakakurudzira bhaudhi
Hot Dip kwakakurudzira nati
Hot Dip kwakakurudzira midzi midzi
Simbi simbi bhaudhi
Boora muswe waya
Torsional shear bhaudhi ye st ...
Yakakura hexagon bhaudhi yesimbi ...
Cylindrical musoro Welding chipikiri
Izvo zvigadzirwa zvinoshandira izvo hutano zvinodiwa zvehuwandu. Sekureva kweWHO, zvigadzirwa izvi zvinofanirwa kuwanikwa "nguva dzese, muhuwandu hwakaringana mumafomu akakodzera edhayeti, uine hunhu hwakavimbika uye neruzivo rwakakwana, uye pamutengo uyo munhu nevemunharaunda vanogona kutenga". Izvo zvigadzirwa zvinoshandira izvo hutano zvinodiwa zvehuwandu. Sekureva kweWHO, zvigadzirwa izvi zvinofanirwa kuwanikwa "nguva dzese, muhuwandu hwakaringana mumafomu akakodzera edhayeti, uine hunhu hwakavimbika uye neruzivo rwakakwana, uye pamutengo uyo munhu nevemunharaunda vanogona kutenga".
Simbi yesimbi yakakodzerwa nedenga uye madziro matanda esimbi mamiriro enjiniya. Kutwasuka kunowanzoreva simbi yakatenderera iyo inosunga masimbi esimbi, kureva masimbi esimbi akasimba, kusimudzira kudzikama kwemapurini uye kuita kuti mapurini asanyanya kutadza kugadzikana nekukuvara pasi pemamwe masimba ekunze. Iko kune diagonal brace (kureva 45-degree kukotama pane iyo tambo tambo) uye yakatwasuka brace (kureva iyo yese yakatwasuka). Mushure mekupisa kwekusimudzira kurapwa, antirust athari inowanikwa.
Torsional shear bhaudhi yesimbi mamiriro
Simbi simbi bhaudhi imhando yepamusoro-simba bhaudhi uye rudzi rweyakajairwa chikamu. Simbi simbi mabhaudhi anonyanya kushandiswa musimbi simbi ouinjiniya kubatanidza kubatana maporesi esimbi mamiriro mahwendefa. Simbi simbi mabhaudhi akapatsanurwa kuita torsional shear mhando yakakwira-simba mabhaudhi uye hombe yakakomberedzwa yepamusoro-simba mabhaudhi.
Welding zvipikiri ndezvekubatanidza zvine yakasimba simba uye kuomarara. Welding zvipikiri ipfupi kune cylindrical musoro wekutema zvipikiri zve arc stud welding. Zvipikiri zvewelding ndezvemazita akaenzana Ф 10 ~ Ф 25 mm uye hurefu hwese kusati kwasvika iwo 40 ~ 300 mm. Masolder studs ane chiratidzo chemugadziri chakagadzirwa neakavezwa mavara kumusoro kwepamusoro pemusoro. Solder studs anoshandiswa zvakanyanya.
Yakakura hexagon bhaudhi yesimbi mamiriro
Simbi simbi bhaudhi imhando yepamusoro-simba bhaudhi uye rudzi rweyakajairwa chikamu. Simbi simbi mabhaudhi anonyanya kushandiswa musimbi simbi ouinjiniya kubatanidza kubatana maporesi esimbi mamiriro mahwendefa. Makuru mahexagonal akakwira-simba mabhaudhi ndeaya epamusoro-simba giredhi yezvakajairwa screws. Iyo hexagonal musoro ichave yakakura. Iyo hombe nhanhatu-kona yakaumbwa bhaudhi ine bhaudhi, nzungu uye mawasher maviri. Kazhinji 10.9.
Tesla's Elon Musk inotaura nezve imwechete yekukanda dhizaini uye yayo yekurovera gadziriso zano
Hebei tailian fastener yekugadzira co., Ltd yakasarudzwa seimwe yepamusoro mabhizimusi mazana mashanu muChina.
Hebei Tailian Fastener Kugadzira Co, Ltd. yadzokera kubasa mukuzara kwese
International Hardware Guta c3-3, Yongnian Dunhu, Handan Guta, Hebei Province, China
Runhare: 0086- （0） 310-6666399